Meizu 16s Pro: Caddeymaha rasmiga ah, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Meizu 16s Pro horey ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Dhawaan ayaa la xaqiijiyay in moodelkani dhowaan suuqa soo galayo, soo bandhigidiisi rasmiga ahaydna durba way dhacday. Waa taleefan cusub oo ku dhex jira dhamaadka sare ee soo saaraha Shiinaha, kaas oo aan ka baranaynay faahfaahinta toddobaadyadii, mahadsanid daadinta kaladuwan.
Hadda waa rasmi, markaa waxaan ka ognahay wax walba oo ku saabsan qaabkan. Waan arki karnaa sida nooca la casriyeeyay ee Meizu 16s ee sumadda Shiinaha. Marka barnaamijkan 'Meizu 16s Pro' wuxuu nooga tagayaa horumarro gaar ah oo dhinacyada qaarkood ah, sida processor-ka ama kaamirooyinkeeda, xitaa waxqabadka wanaagsan.
Ku saabsan naqshadeynta, waxay dooratay looxyo aad u dhuuban shaashadda oo dhan. Ma jiro jiritaan darajo, laakiin waxaan arki karnaa in qarka kore uu xoogaa ka ballaaran yahay kamaradda hore ee taleefankana lagu dhex arkay. Waxay u oggolaaneysaa hore qalabka in si wanaagsan loo isticmaalo mar walba.
1 Qeexitaannada Meizu 16s Pro
Qeexitaannada Meizu 16s Pro
Haddii aan diirada saarno qeexitaankaaga, Meizu 16s Pro waa taleefan heer sare ah oo Android ah. Qalabku wuxuu leeyahay astaamo farsamo oo wanaagsan, isagoo adeegsanaya processor-ka ugu fiican suuqa maanta, sidoo kalena leh kamarado fiican. Marka waxaan kaa filan karnaa waxqabad wanaagsan, taas oo hubaal ah inay lama huraan tahay. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Shaashad: 6,2-inji Super AMOLED leh FullHD + xal (2.232 x 1.080 pixels)
Kaydinta gudaha: 128/256 GB (Waa la ballaarin karaa kaarka microSD)
Kaamiradda gadaal: 48 MP oo leh f / aperture f / 1.7 + 20 MP oo leh aperture f / 2.6 + 16 MP oo leh aperture f / 2.2
Kaamirada hore: 20 MP oo leh f / 2.2 aperture
Batariga: 3.600 mAh
Nidaamka hawlgalka: Android Pie oo leh Flyme 8
Isku xirnaanta: 4G / LTE, Dual SIM, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a / c, USB-C, GPS, GLONASS
Kuwa kale: Dareeraha sawirka faraha, NFC
Nooca Shiinaha ayaa la yaabay taleefan u adeegsada processor ahaan Snapdragon 855 Plus. Waa qeybta sare ee sumadda Mareykanka, taas oo illaa iyo hadda aan ku aragno gaar ahaan taleefannada loogu talagalay ciyaaraha. Horumar muhiim u ah shirkadda, taas oo nooga tagaysa sidan habkan iyada oo taleefankeedii ugu xoogga badnaa illaa hadda. Waxay ku timaaddaa isku-darka kala duwan ee RAM iyo kaydinta. Intaa waxaa dheer, dareeraha sawirka faraha wuxuu ku yaalaa shaashadda kiiskan.
Kaamirooyinka ayaa ah mid kale oo ka mid ah awooda Meizu 16s Pro. Shirkaddu waxay dooratay saddex kamaradood oo gadaal ah, halkaas oo aan ka helno 48 MP dareemayaal muhiim ah kiiskan. Kaamirooyinka waxaa ku shaqeeya sirdoon macmal ah, oo naga caawin doona ogaanshaha muuqaalka iyo qaababka sawir qaadashada oo dheeri ah. Waxay sidoo kale la socotaa nooca ugu dambeeyay ee lakabka qaabeynta sumadda, kaas oo si hufan loogu bilaabay qaabkan. Waa tii ugu horreysay ee horay u haysata.
Nooca Shiinaha ayaa taleefankan horey ugu sii iibiyay waddankiisa. Isticmaalayaasha Shiinaha ee doonaya inay iibsadaan taleefankan waxay awood u yeelan doonaan inay si rasmi ah u iibsadaan. Waqtigan xaadirka ah ma jiro wax war ah oo ku saabsan qorshayaashiisa ah inuu ka hirgaliyo dalka Meizu 16s Pro. Mararka qaar waxay taleefannadooda ku soo bandhigaan Yurub, laakiin ma ogin waxa ku dhici doona qalabkan.
Meizu 16s Pro wuxuu ku bilaabmayaa afar midab, kuwaas oo ah waxa aad ka arki karto sawirkan. Halka ay ku timaaddo saddex nooc oo kala duwan marka la eego RAM iyo kaydinta. Marka isticmaalayaasha xiiseynaya taleefankan waxay awoodi doonaan inay doortaan nooca ugu xiisaha badan arrintan. Noocyada la heli karo ee taleefanka iyo qiimahoodu waa:
Qaabka 6GB / 128GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.699 yuan (qiyaastii 340 euro in la beddelo).
Nooca leh 8 GB / 128 GB wuxuu ku kacayaa 2.999 yuan (oo qiyaastii ah 378 euro in la beddelo).
Qaabka leh 8 GB / 256 GB ayaa lagu bilaabay qiime dhan 3.299 yuan (in ka badan ama ka yar qiyaastii 415 euro in la beddelo).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu 16s Pro: Dhamaadka dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha